ဒဂုံတက္ကသိုလ် မှ သုံးဆယ်မြို့သို့ … ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ဒဂုံတက္ကသိုလ် မှ သုံးဆယ်မြို့သို့ … ။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် မှ သုံးဆယ်မြို့သို့ … ။
Posted by black chaw on Jan 30, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 20 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံး ကျွန်တော် အနားမရခဲ့ပါဘူး။
စနေနေ့မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရဲ့ သမီးလေး ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ ဘွဲ့ယူလို့ အကူအညီတောင်းသဖြင့်
လိုက်ပို့ခဲ့ရပါသည်။ ခေတ်သစ်ဘွဲ့နှင်းသဘင် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို ရွာသူရွာသားတွေလည်း သိထားရအောင် ဓါတ်ပုံလေးတွေ
ရိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေလည်း အလွမ်းပြေပေါ့ဗျာ။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်အ၀င်။ ဒီနေရာမှာ စုပြုံတိုးပြီး ဘွဲ့ရတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။
၂။ အပေါ်ကပုံရဲ့ နောက်ကျောဘက် ကျောင်းဝန်းထဲက ဒီနေရာလေးမှာလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်သူတွေများပါတယ်။
၃။ ရေပန်းအ၀ိုင်းဗျ။ သူတို့ကျောင်းကြီးမှာတော့ ဂျဒ်စင်ကြီးလိုပဲပေါ့ဗျာ။ စုပြုံတိုးပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတယ်။
၄။ ဒဂုံ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အဆောက်အဦ ကြီးပါဗျာ။
၆။ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ ဘွဲ့တက်ယူသူတစ်ဦး။
၈။ စိတ်ပါလက်ပါ ကင်မရာချောင်းသူ။
၉။ ရိုက်ပွဲကြီးကျင်းပနေကြသူများ။ ဓါတ်ပုံကိုပြောတာပါ။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကို ကန့်ကော်တောလို့ ခေါ်ကြတယ်ဗျ။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကိုတော့ စွယ်တော်ရိပ်လို့ အမည်ပေးသင့်တယ်။
တကယ်ကို စွယ်တော်ပင်တွေ ကြီးပဲ တွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။ လှတယ်ထင်လို့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ စွယ်တော် ရွက်ကလေးတွေပါ။
၁၀။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ထဲက စွယ်တော်ရွက်ကလေးတွေ။
ဒါက စနေနေ့မှာ ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ထဲမှာ ရိုက်ခဲ့တာပါ။
တနင်္ဂနွေ နေ့ မနက်စောစောမှာတော့ သုံးဆယ် ဆရာတောကြီး ရှိနေတဲ့ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းနံဘေးက
သုံးဆယ်မြို့လေးဆီ မိသားစုလိုက် ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ဘူးသူတွေလည်း ရွာထဲမှာ ရှိချင်ရှိမှာပါ။
ဆရာတော်ကြီးက အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ ပါ။
လာရောက်ဖူးမျှော်သူ မှန်သမျှကို သက်သတ်လွတ်နို့ခေါက်ဆွဲ ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါတယ်။
အမြဲတမ်း မျက်လုံးကို မှိတ်နေတော်မူပါတယ်။ လူနှစ်ယောက်ကတွဲပြီး စင်္ကြန်လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့
အချိန်မှာလည်း ဆရာတော်ကြီးက ခြေထောက်မထောက်နိုင်ရှာပါဘူး။
တချို့အတွေးလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပေမယ့် သတ္တိမရှိတာကြောင့် မပြောတာကိုတော့
နားလည်ပေးကြပါ။ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်လာခဲ့ပါတယ်။
စင်္ကြန်လျှောက်တဲ့ သုံးဆယ်ဆရာတော်ကြီး ။
လူနှစ်ယောက်တွဲပြီး စင်္ကြန်လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ကြီး။
ကျောင်းဝန်းထဲမှာ တည်နေတဲ့ ရွှေတိဂုံပုံတူ စေတီတော်။
ဘဘဘလက်ရေ ဒဂုံတက္ကသိုလ် ရေပန်းအ၀ိုင်းထဲက ပတ္တမြားတုံးကြီးကို ကျောင်းသားတွေကတော့ အမဲသားတုံးကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်
စွယ်တော်ရွက်ပုံလေးက colorful ပဲ တော်တော်လှတယ်
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဘာခေါ်မလဲ ဇွဲလား..
မထနိုင်တာကို ရအောင် စင်္ကြလျှောက်နေတာကိုပြောတာပါ.
ဒဂုံကတော့ စိတ်အလေဆုံးနေရာပါ..ကျနော် ဘွဲ့ မရတာ..
တက္ကသိုလ်ကို ချောင်ထဲပို့ ထားတာကြောင့်လဲ ပါတယ်
တစ်နှစ်ကို ၅ ရက်လောက်ပဲ ရောက်တယ်
နောက်ဆုံးနှစ် သွားအပ်တဲ့ နေ့ ပဲ ရောက်တယ်..
ဒါကြောင့် ဘယ်မိန်းမမှလဲ မကြိုက်ဘူး
ခင်ဗျား လဲ ဓာတ်ပုံအက်ဆေးဆန်လာသလိုပဲနော့။(ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါ)
အပေါ်ဆုံးပုံရဲ့ မိသားစုမှာ ရိုက်ပေးသူက ကိုရင်လေး။
ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံမိသားစုရဲ့ ပုံစံလေးတွေကလဲ ရိုးရိုးသားသားပုံလေးတွေ။
စဉ်းစားရင် စဉ်းစားသလောက် အတွေးနယ်ချဲ့နိုင်တဲ့ပုံလေးပါဘဲ။
ပြီးတော့ စွယ်တော်ရွက်တွေကလဲ အာရ်စီ ဘေးက သက်တော်ရှည်စွယ်တော်ပင် ကြီးကို
သတိရစေတယ်ဗျ။သူ့ခမြာ သူများရီးစားစကား ပြောတဲ့အထဲကန့်လန့် ကန့်လန့်နဲ့ပေါ့ဗျာ။
ကျနော့မှာ သုံးဆယ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးဗျ။
ကြုံမှပြောပြပါအုန်းမယ်။ ဒါးလွတ်ကိုင် လူမိုက်တွေအကြောင်း။ အသားရော်၊အသားနော်ဘက်က
အပြင်းပြေလူသတ်တဲ့လူတွေ၊ အရက်တလုံးပေးတာနဲ့ အငှါးသတ်ပေးတဲ့ လူတွေပေါ့ဗျာ။
ခင်ဗျား ဓာတ်ပုံတင်တာနဲ့ အောက်က ကလေးက ကြော်ငြာဝင်တာနဲ့ ဘာမှလဲဆိုင်ဘူး။
ဥက္ကံ သုံးဆယ် ကျုပ်ပြန်ဦးမယ်
ဆောရီးပါတီချယ်ရေ။ ပြောချင်တာတွေက ကောင်းတာတွေလဲပါပေမဲ့
လူမိုက်တွေထဲမှာ ကောင်းသောလူမိုက်တွေ (အမှန်တရားအတွက် မိုက်တဲ့သူတွေ)
သာမန်စာရေးလေး ဘဝကနေ သူဋ္ဌေးကြီးဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာတွေလဲ သုံးဆယ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့
ဆရာစံနယ်မြေဆိုပြီး နဂါးကိုဂဠုန်စီးထားတဲ့ ပုံကိုပြန်သတိရလိုက်လို့
နဲနဲ တောင် လန့်သွားတယ် (တီချယ်)ကို။ဟဲဟဲ
တစ်ခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ပုံတွေ ကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးနော်။
တကယ်တော့ တီချာက အဝေးရောက် သုံးဆယ်သူပါ။ ပြီးတော့ ကိုချောလိုပါပဲ။
(တချို့အတွေးလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပေမယ့်
Moe Z – စွယ်တော်ရွက်ပုံလေးတွေက အပြင်မှာ ပိုလှပါတယ်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကြီး ဘေးပတ်ချာလည် တစ်ခုလုံး စွယ်တော်တွေ အများကြီးပဲဗျ။
သူကြီးဆာဗာကို အားနာလို့ အမွှာပူး ပို့စ်တစ်ခု မွေးထုတ်လိုက်တာပါ။
ကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတဲ့ စွယ်တော်ပုံလေးတွေ ကျန်သေးတယ်။
အရင်ဆုံးပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
စိန်ပေါက်ပေါက် – ပေါက်ဖေါ်ဆိုတဲ့ နာမည်လေးပဲ ခေါ်လို့ကောင်းပါတယ် လူပျိုကြီးရယ်။
ကိုသစ်မင်း – ဟုတ်တယ်ဗျ။ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်လို ခံစားလို့ရစေချင်တာ။ သုံးဆယ်ဆရာတော်ကြီးကို အနီးကပ် ဖူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုခံစားရလဲလို့ မေးရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိခဲ့ပါတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေဗျာ။
TTNU – အစဉ်အလာကြီးတဲ့ သုံးဆယ်မြို့သူ ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ ဂုဏ်ယူပါတယ် တီချာကြီးရေ။
ညီလေး ကို ကွန်မင့် ပေးခွင့်ပြုပါ ။
လောလောဆယ် မန့် ပါရစေ ။
အဟဲ …အထင်ခံရလည်း မနည်းဆိုပြီး ရေးချလိုက်တာ …
မပြောတော့ဘူး ဆို ပြောစရာမှ မရှိတာ ….ဟီးဟီး…
ဒဂုံ တက္ကသိုလ် ကျနော် မရောက်ဖူးဘူးဗျို့ ……
မမြင်ဖူးတဲ့မြင်ကွင်းတွေအတွက် ကျေးဇူးပါလို့ ….
ဆရာတော်ကို မဖူးဘူးသေး ဘူး..
တင်ပေးလို့ ကြည့်ရတဲ့အတွက် ကျေးကျေးအထူးပါ..
ဒါနဲ့ ဆရာတော်ကြီး စင်္ကြန်လျှောက်တာကိုမြင်ရတာ စိတ်မသက်သာဘူး..
windtalkr – ကွန်းမန့်ပေးတာပဲ ကိုပေရယ်။
ခွင့်တောင်းနေရသေးတယ်။ ကဗျာကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
ဂီဂီ – မောင်မောင်ဇာ ဆိုတာကြီးရဲ့ ရှေ့က ဘွဲ့ကြီးက ခေါ်ရတာ မနိပ်လှဘူး။
အဲဒီ စွယ်တော်ရွက်တွေက (မှန်သောစကားကို ဆိုတာပါ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေပါ)
ဂီဂီ တစ်ခါက ရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ သစ်ရွက်ကြွေပုံလေးတွေကို အားကျပြီး ပုံပေါင်း ၅၀ လောက်ထဲက
ရလာတဲ့ ပုံလေး နှစ်ပုံပါ။ ပုံလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်း ဝေဖန်ပေးစေချင်တယ်။
အားမနာပါနဲ့။ တကယ်ကို အဲဒီလိုပုံလေးတစ်ပုံလောက်ရချင်နေတာ ပါဗျာ။
http://myanmargazette.net/84320/travel/photography-pictures-galleries-wallpapers-photo-tips အဲဒီပို့စ်ထဲက ရွက်ကြွေတောဆိုတဲ့ ပုံလေးကို မျက်စိထဲမြင်ပြီး ရိုက်ထားတာပါ။ အခုပြန်ကြည့်တော့ တူလည်းမတူပါဘူး။
amatmin – စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရတာ အတူတူပါပဲ အမတ်မင်းလေးရေ။
အရမ်းကို ကဗျာဆန်ဆန်နဲ့ လှတယ်ဗျို့
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားမဟုတ်တော့ အဲဒီကျောင်းကို မရောက်ဖူးဘူး
အခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ် ….
စွယ်တော်ရွက်မြင်တိုင်း အချစ်ဦးပေးတဲ့ စာနဲ့သစ်ရွက်ကလေးကို သတိရမိရဲ့ (ဤစာအား အမျိုးသမီးများမမြင်ရ) …
အောင်မယ်လေး။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်မြင်ရင်အလိုလိုချွေးထွက်လာတယ်။ ကျွန်မတို့တုန်းက RC2ကနေ ပထမဆုံးအသုတ်မဲဇာ ( ဒဂုံ )ပို့ခံရတာလေ။ ဘာမှမပြီးသေးဘူး။ ရွှံဗွက်တွေ ထဲရုန်းရင်းကန် ရင်းနောက်ဆုံးနှစ်ပြီးရတာ။ ပြီးလဲပြီးရောပထမဆုံးအသုတ်ဘွဲ့ပေးတာ။ မှတ်မှတ်ရရ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ထဲမှာ aircon မတပ်ရသေးဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ဘွဲ့ဝတ်စုံအထူကြီးတွေနဲ့ aircon မရှိ၊ သစ်ပင်မရှိနဲ့ ဧပြီအပူရှိန်ကိုအံတုရင်းဓါတ်ပုံတောင်မရိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ချွေးထုပ်ခန်းတောင်သူ့လောက်ချွေး ထွက်မယ် မထင်ပါဘူး။
စွယ်တော်ရိပ်.. စွယ်တော်ပင်တွေလွှမ်းနေတဲ့… တက္ကသိုလ်ကြီးတခု ရှိနေသေးလို့ပါ…။
၈၈ အရေးတော်ပုံရဲ့.. ပထမတက္ကသိုလ်ကြီးပါနော…။
ကိုဘလက် ရေ –
ရေပန်းကြီး လဲ ကြည့်သွားတယ်။ ချစ်စရာ ကောင်မလေး တွေ ကိုလဲ ကြည့်သွားတယ်။ အဝါရောင် ခေါင်းပေါင်း အဝါရောင် ပုဆိုး နဲ့ ရွှေအဆင်း ကဲ့သို့လင်းနေသူ ကိုလဲ အားပေးသွားတယ်။
ဆရာတော်ကြီး ကိုဖူးခွင့်ရလို့ လဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သုံးဆယ် မုန့်ဟင်းခါး စားဘူးတယ်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဆိုတာ ကြားဘဲကြားဘူးတာ၊ အခုမှ ရောက်ဘူး သွားပါ၏။
သတင်းဓာတ်ပုံ တွေ တင်ပေးလို့ မမြင်ဘူး၊မတွေ့ဘူး တာတွေ မြင်တွေ့ သွားရလို့ သင်းကရုပါ။
တစ်ခြား စွယ်တော်ရိပ် ကို မမ နဲ့ ဝေဝေ သိမှာပေါ့။ ဘယ်မေ့ကြလိမ့်မလဲ။ ;-)
King – ကျေးဇူးပါ ကင်းရေ။
Thel Nu Aye – အော် ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ စစ်စစ်ကြီးပဲဗျ။ အခုတော့ ဘွက်တွေ ရွှံ့တွေ
မရှိတော့ပါဘူး။ နည်းနည်းဝေးတာ တစ်ခုပါပဲ။
kai – စက်မှု တက္ကသိုလ်ကြီးကို စွယ်တော်ရိပ်လို့ ခေါ်ခဲ့တာ ကျွန်တော် တကယ်မသိဘူး သူကြီးရေ။
ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ အခွင့်အရေးရရင် စက်မှုတက္ကသိုလ်ထဲက စွယ်တော်ရွက်တွေကို
Khin Latt – နေ့ချင်းပြန်ပါ အစ်မလတ်ရေ။ ရန်ကုန်ကနေ မှော်ဘီ၊ တိုက်ကြီး၊ ဥက္ကံ ပြီးရင် သုံးဆယ်ကို
ရောက်ပါပြီ။ ကားမောင်းချိန် ၂ နာရီ ခွဲလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ မိုင် ၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်လို့
ထင်ပါတယ်။ သေချာ မကြည့်လိုက်မိလို့ပါ။
မာစတာ ဘလက်ကြီးရေ၊ပညာရှာတက္ကသိုလ် ကြီး မှာ ပညာတတ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်လို့ရတဲ့
ပညာတ် မြင်ကွင်းမှသည်- သက်တ်ာရှည်၊ဝေဒနာခံစားနေရသောဆရာတော်ကြီး၏၊မလျှော့သောဇွဲဖြင့်လုံးလ
၀ါရာမှရော်ပြီးကြွေုလုလု စွယ်တော်ရွက်ကလေးတွေကလည်း သင်္ခါရသဘောနှင့် ဆက်နွယ်ထင် ဟပ်နိုင်ပါသ ဗျား၊သည်ဓါတ်ပုံ အစုအဝေးကလေးကို – သင်္ခါရ မြင်ကွင်း လို့ ကျနော် တပ်ပါသဗျား။
သင်္ခါရ မြင်ကွင်း တဲ့လား။
ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော် ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ။
ရှင်းရှင်းပြောပါလား ဘာတွေးမိတယ်ဆိုတာ။ ကြောက်မနေပါနဲ့။
အဲဒီ သုံးဆယ် လူမိုက်တွေအကြောင်း ကြားဖူးတယ်ဗျ။ ဦးဘောဂ တို့ဘာတို့။
သိသလောက် သုံးဆယ်မြို့ပြင် က မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းကတော့ ဝိနည်း စည်းကမ်း တကယ်မှန်တယ်ဗျို့။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကိုတော့မရောက်ဖူးဘူး။ ဒါကြောင့်ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရှုခံစားသွားပါတယ်။ သုံးဆယ်ကိုတော့ရောက်ဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၀ တုန်းက ရန်ကုန်အပြန် တစ်လအတွင်းကိုဘဲ၃ခေါက်လောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ပထမတခေါက်သွားတုန်းကဆုတောင်းလိုက်တာကိုး။ နောက်ထပ် ထပ်လာပြီးဆရာတော်ကြီးကိုဖူးပါရစေဆိုပြီးတော့…။အဲဒီတုန်းကဆို၇င်ဆရာတော်ကြီးကအခုလိုတောင်လူတွဲ
နဲ့လမ်းမေလျှောက်နိုင်ပါဘူး။ ကုတင်ပေါ်မှာဘဲလျှောင်းနေတာပါ။ လူတွေကအလုအယက်တန်းစီပြီး ဖူးရတာပါ။ ပြီးတော့သတ်သတ်လွတ်ကျွေးတဲ့ထမင်းစားဆောင်ကို အလုအယက်တန်းစီရတာပါ။ မစားချင်ရင်လည်းရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေကတော့ ဒီလောက်တောင်လာပြီးမှ ၇အောင်တိုးစားမယ်ဆိုပြီး
ကြိုးစားပမ်းစားကိုတိုးရတာပါ။ အစ်မဆိုရင် မူးလဲသွားမလိုတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးဘဲဘလက်ရေ…ဆရာတော်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသိရလို့။ ဆ၇ာတော်ကြီးကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။